စူပါပါဝါများကတကယ့်အစစ်အမှန်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ (ရင်းမြစ်များနှင့်လင့်ခ်များဖြင့်) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်။
စူပါပါဝါများကတကယ့်အစစ်အမှန်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း (ရင်းမြစ်များနှင့်လင့်ခ်များဖြင့်!)
NoFap အပေါ်မဟုတ်သောပြည်သူ့ကျနော်တို့ယုံကြည်ပြောပါ "အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ။ "
ဟင့်အင်း၊ ငါပျံသန်းသည်၊ မမြင်ရသော (သို့) ရုပ်ပြစာအုပ်သူရဲကောင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်၏ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
စူပါပါဝါဆွေမျိုးဖြစ်ကြသည်။ "ငါဒီညသုံးခုနှင့်အတူမိတ်ကပ်!" ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “ ငါအသံမမြည်ဘဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချီးကျူးလိုက်တာ” သည်နောက်တစ် ဦး အတွက်အဓိကခုန်ချခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိအဖြစ်ရှိပါသည်။ (သင်ညမှာကြက်ဥအနှစ်စားခြင်းသင်ကစူပါပါဝါပေးနိုငျကွောငျးကိုသိခဲ့ပါနောက်တစ်နေ့နံနက်မြှင့်တင်ရန်သလောအဖြေကိုများအတွက်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာဘဝကရယ်စရာဖြစ်ပါသည်။ )
အသိပေးချက်: Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်းဆိုသစ်ကိုစူပါပါဝါအစီအစဉ်ကိုစတင်ရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဥပဒေ #1: စုစုပေါင်း Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence။ အဘယ်သူမျှမ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အဘယ်သူမျှမအော်ဂဇင်မရှိ edging, Edging Edge အဘယ်သူမျှမ, Edging အကြောင်းကိုစဉ်းစားစဉ်းစားအကြောင်းကိုပြောနေတာအကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟန်ဆောင်ထားသည့်အရာသည်ပင်အရာမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
ဥပဒေ #2: ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်သိသိသာသာအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့ထိတွေ့မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက် - အကယ်၍ သင်သည်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီအစီအစဉ်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ကြည့်နေလျှင်။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
နေ့စဉ်တစ်နာရီမှ (Reddit အပါအဝင်) ကန့်သတ်လူမှုမီဒီယာနှင့်အင်တာနက်အချိန်: #3 စည်းကမ်းများ။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
#4 အုပျစိုး: အထူးသဖြင့်သကြားနဲ့ဂျုံ, junk အစားအစာများကိုကန့်သတ်။ ကောင်းသောအရင်းအမြစ်မှအဆီမစားအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
#5 အုပျစိုး: နေ့စဉ် 10 မိနစ်တှေးတော။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
#6 အုပျစိုး: နေ့စဉ်အအေးမိရေချိုးခန်းကိုယူပါ။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
နည်းဥပဒေ ၇။ ညကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူပါ။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
#8 အုပျစိုး: တစ်ပတ်ကိုခုခံ-based လေ့ကျင့်ခန်း 2-4 ကြိမ်လုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဤလုပ်ငန်း
သင်မြင်သည့်အတိုင်းအချက်တစ်ခုစီသည်သင်၏ NoFap ခရီးနှင့်ဆက်စပ်သောဤအချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြနိုင်သောစာမျက်နှာကိုညွှန်ပြသည့် link တစ်ခုရှိသည်။ ငါထွက်အလုပ်လုပ်ရန်သင့်အားပြောရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်“ အားကစားရုံကိုရိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒါပဲ။ ဒါကပုံသေနည်းပါပဲ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှဤသို့ပြုလုပ်ပြီးသင်၏စူပါပါဝါများကိုနှစ်သက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်၏အာရုံကိုခံစားပါ။
ကျန်းမာသောဟော်မုန်းဖို့ Pocket လမ်းညွှန်
မင်းကအင်ဆူလင်ကိုခေါ်တဲ့ဒီဟော်မုန်းရှိတယ်။ ၎င်းသည်များစွာသောအရာများကိုပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအဓိကအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုကျန်းမာရေးအဆင့်သို့ကျဆင်းစေခြင်းအားထိန်းညှိပေးသည်။
နောက်ဆုံးတော့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမတက်နိုင်တော့ဘူး။ ၎င်းသည်အင်ဆူလင်ဖြင့်ထိုးနှက်ခံရခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကြောင့်၎င်းကိုမခံစားနိုင်ပါ။ (အကျွမ်းတဝင်အသံရှိသလား။ ) ဖြစ်လာသည် အင်ဆူလင်ခံနိုင်ရည် or အင်ဆူလင်ဒဏ်ခံ။
ထိုကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြုလုပ်ရုံသင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်ကျန်းမာသောအခါထိုသို့ပြုကြသည်တူညီသောလမ်းကိုတုံ့ပြန်ရရန်သင့်သွေးထဲမှာ ပို. ပို. အင်ဆူလင်ကြာပါသည်။
ဒါကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်သလဲ။ ကောင်းပြီ၊ kryptonite ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ရအောင်။ ဟေ့သိပ္ပံပညာ, သင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှ dopamine သည်းခံစိတ်အဘယ်သို့ပြုသနည်း
It ကြောင့် သငျသညျ လူမှုရေးအရစိုးရိမ်.
dopamine desensitivity မတခြားဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? YourBrainOnPorn အဆိုအရ, dopamine desensitivity အောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲမှာသင်တက် fucks:
လူကြီးလူကောင်းတို့သည် kryptonite အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ၎င်း၏အမည်ကို dopamine သည်းခံစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားများစွာသည်သူတို့၏ kryptonite ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသဘာဝယုံကြည်မှုနှင့်အံ့သြဖွယ်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။ အချို့သောယောက်ျားများသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်တိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ကြရလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကစူပါပါဝါတွေကိုမယုံရင်တောင်အနည်းဆုံး kryptonite ကိုယုံပါ။
လေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ ဥပမာ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဟာ dopamine သဘောသဘာဝကိုအလွန်အသည်းအသန်ဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခင်ကစူပါပါဝါခံစားရတယ်, ငါသူတို့အဘို့အပြန်လာမယ့်။
LINK - စူပါပါဝါများကတကယ့်အစစ်အမှန်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း (ရင်းမြစ်များနှင့်လင့်ခ်များဖြင့်!)